ရေတွင်း ပြန်တူး ကြည့်ပါ … ( ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့် စေချင်တယ် ) – Let Pan Daily
ရေတွင်း ပြန်တူး ကြည့်ပါ … ( ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့် စေချင်တယ် )
တစ်ခါက လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ယာတော မှာ ရေလို လို့ ရေတွင်း တစ်တွင်းတူးပါတယ် ။ အတောင် ( ၂၀ ) လောက်လည်း ရောက်ရော လူလည်း တော်တော် ကြီးကို မောပန်း နေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရေတွေ့မယ့် အရိပ် အယောင်အနံ့ အသက်တောင်မှ မရသေး ပါဘူး ။ဒါနဲ့ အမောဖြေ နေတုန်း လူတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ပြောပါတယ် ။“ ခင်ဗျားဗျာ ၊ ဒီလို နေရာမှာ ရေတွင်းတူးလို့ ဘယ်ရေ တွေ့မှာလဲ ။ လာ ကျွန်တော်ပြတဲ့ နေရာမှာသာ တူးလိုက် ၊ အတောင် ( ၂၀ ) မပြည့်ခင် ရေ မတွေ့ရင် ကျုပ်ကို ပြောချင်သလိုပြော ” ဆိုပြီး နေရာသစ် တစ်ခုကို လိုက်ပြပါတယ် ။
အဲဒါ နဲ့ အဲဒီလူ ပြတဲ့နေရာမှာ သူ ဆက်ပြီး တူး ပါတယ် ။ အတောင် ( ၂၀ ) ကျော် အစိတ်လောက် ရောက်လည်း ရေက မတွေ့ ပါဘူး ။ သူလည်း မောကလည်းမော ၊ စိတ်ကလည်း တော်တော်ပျက်နေပါတော့တယ် ။အဲဒီတုန်း နောက်ထပ် ဆရာ တစ်ယောက် ရောက်လာ ပြန်ပါတယ် ။ သူကလည်း ပြောတယ် ..“ဟာ – ဒီလူတွေ ရေကြော အကြောင်း ဘာမှ မသိဘဲနဲ့ လျှောက်ပြောနေကြတာ ၊ ဒုက္ခပါဘဲ ၊ လာလာ ၊ ကျွန်တော် နောက်လိုက်ခဲ့ ၊ ကျွန်တော်ပြတဲ့ နေရာမှာသာ တူးလိုက် ၊ အတောင် ( ၂၀ ) နဲ့ အစိတ် ကြားလောက် မှာ ရေတွေ့ကို တွေ့ရမယ်” ဆိုပြီး နေရာသစ် တစ်ခုကို လိုက် ပြပြန်ပါတယ် ။
ဒါနဲ့ သူလည်း “အင်း ဒီလူပြော တာတော့ ဟုတ်ဟန် တူတယ် ။ နေရာသစ် ကို တူးမှ ” ဆိုပြီး နေရာသစ်မှာ နောက်ထပ် ရေတွင်း တစ်တွင်း တူးပြန်ပါတယ် ။ ဟိုလူပြောသလို အတောင် အစိတ်ကျော်ပြီး ( ၃၀ ) နားကပ် လာတာတောင် ရေက အရိပ်အငွေ့ တောင် မမြင်ရပါဘူး ။ လူကလည်း ဖတ်ဖတ်မောနေပါပြီ ။ဒါနဲ့ သူလည်း အမော ဖြေရင်း ထိုင် စဉ်းစားတယ် ။“အင်း – ပထမဆုံး တူးခဲ့တာ အတောင်( ၂၀ ) ၊ ဒုတိယတွင်းမှာ အတောင် အစိတ် ၊ တတိယတွင်းမှာ အတောင်( ၃၀ ) နဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် ငါတူးခဲ့တာ အတောင်( ၇၀ ) တောင် ကျော်နေပါကောလား ” “ငါ့ဟာငါ ဆက်တူး နေရင် ဒီနယ် မှာ အတောင် ( ၆၀ ) ကျော်အောင် တူးရတဲ့ ရေတွင်း ခပ်ရှားရှားရယ်။
သူများ စကား နားယောင်ပြီး ဟိုတွင်းတူး ၊ ဒီတွင်းတူးနဲ့ မောတာ သာ အဖတ် တင်တယ်၊ ငါ့တွင်းဘဲ ငါဆက်တူးတော့မယ်” ဆိုပြီး သူ ပထမဆုံး တူးခဲ့တဲ့ တွင်းဆီ ပြန်သွားပြီး စိုက်လိုက် မတ်တပ်နဲ့ တူးလိုက်တာ အတောင် ( ၄၀ ) ကျော် လောက်မှာ ရေတွင်းက အောင်သွားပြီး ရေတွေ့သွားပါတော့တယ် ။ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာ လည်း ဒီလိုဘဲ အစကတော့ အားကြိုး မာန်တက်နဲ့ စခဲ့ကြပေမယ့် တစ်ဝက် တစ်ပျက် ရောက်ခါမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရပ်နားထားတဲ့ အလုပ်တွေ ၊ စီမံကိန်းတွေ ၊ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေ ဘယ်လောက် တောင်မှ များခဲ့ ပြီလဲ ။ကြီးမားတဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေသာမက အတတ်ပညာ တစ်ခု သင်ယူတာ ၊ သင်တန်း တစ်ခု တက်တာ ၊ ကိုယ် အလေးချိန်ချတာ . . . စတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ အပါအဝင်ပေါ့ ။ခင်ဗျား တို့တော့ မသိဘူး . . . ကျွန်တော့် မှာတော့ ဒီလို ကိစ္စတွေ မရေမတွက် နိုင်အောင် များခဲ့လှပါပြီ ။ ရလဒ်ကတော့ ဘာကို မှ အောင်မြင်ပြီးစီးအောင် မလုပ်နိုင်ဘဲ သူလို ငါလို ဘဝမှာဘဲ ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေရတာပါဘဲ ။ ကိုယ့်ကိုယ် ကို ယုံကြည်မှုလည်း ကျဆင်းလာပါတယ် ။
အထက်က ရေတွင်းတူးတဲ့ လူလို စ, ပြီး တူးမိတဲ့ ရေတွင်းတစ်ခု ကိုသာ ရေတွေ့သည် အထိ ပြီးစီးအောင် တူးမယ် ၊ ပြီးရင် နောက်တစ်တွင်း ဆက်ပြီး တူးမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ ရေထွက် နေတဲ့ ရေတွင်း ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင် နေပြီပေါ့ ။အခုတော့ ရေမထွက်တဲ့တွင်းတွေ ဟိုမှာလည်း တစ်တွင်း ၊ ဒီမှာလည်း တစ်တွင်းနဲ့ တွင်းတွေ သာများနေပြီး ဘာမှ သောက်လို့မရ၊ သုံးလို့မရနဲ့ “အသုံးမကျတဲ့ ရေတွင်းပိုင်ရှင်တွေ” ဘဲ ဖြစ်နေရတော့တာပေါ့။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဟာ ရေမထွက်တဲ့ ရေတွင်းတွေရဲ့ အလည်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင် မှိုင်တွေချနေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ။ ရေထွက်အောင် တူးသွားနိုင်သူတွေ ကတော့ သူတို့တူးထားတဲ့ ရေတွင်းထဲကရေတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ သောက်သုံးနေ ကြတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သူတို့ကို ငေးကြည့်နေရတယ်။ကဲ – မိတ်ဆွေ ၊ ခင်ဗျားလည်း လူ ၊ သူတို့လည်းလူ အတူတူပါဘဲဗျာ။ ဘာမှ ကွာခြားချက် မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တကယ် လိုအပ်နေတာကတော့ ရေတွင်းကို ပြီးစီးအောင် ဆက်မတူးကြတာပါဘဲ။
ကဲ – ကနေ့ကစပြီး ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ ခင်ဗျားတူး လက်စ ရေတွင်းတွေထဲက ခင်ဗျားအတူးချင်ဆုံး ရေတွင်းတစ်တွင်း ကို ပြန်ရွေးချယ် လိုက်ပြီး ပြန်တူးကြရအောင်လား။ ရေထွက်သည့် တိုင်အောင်ပေါ့ ။ကိုယ်တူးလိုက်တဲ့ ရေတွင်းက ရေထွက်လာတဲ့ အောင်မြင်မှု နဲ့ ၊ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရမှုတို့ကို ကျွန်တော်တို့ ခံစားရယူ ကြမယ်လေ။ “ငါ လုပ်နိုင်တယ်” “ငါ စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်” ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာ ပြန်ပြီး တည်ဆောက်ယူကြမယ်။ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ မွေးပြီး ပြန်ကြိုးစားကြရအောင်လား။ ကျွန်တော်တို့မှာ တူးလက်စ ရေတွင်း တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု ကတော့ ကိုယ်စီ ရှိနေကြတာဘဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ အခုဘဲ စ, လိုက်ကြပါစို့။ အချိန်မနှောင်းသေး ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရေတွင်း ပြန်တူးကြမယ်လေ။
(ဇွဲနဲ့သာ တစိုက်မတ်မတ်တူး . . နောက်ဆုံး ရေတွေ့ရမှာ မလွဲပါဘူး )
(16.7.2020) မှ (22.7.2020) အထိ (၇) ရက် သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း.. ဆရာ ငြိမ်းအေးလူ(ဗေဒင် သုတေသီ)